Yintoni umzobo | Abadali be-Intanethi
Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba yintoni umzobo. Kodwa eyona nto ikhuselekileyo kukuba awuzange ucinge ngokubaluleka koku. Ngaba ngokwenene uyazazi zonke izibonelelo ekunika zona? Ngaba ukhe wayisebenzisa rhoqo?
Ukuba ufuna yazi ukuba yintoni umzobo, eyona nto isetyenziswayo inawo kwaye kutheni usisixhobo esiluncedo kakhulu kwiiprojekthi sikuxelela yonke into.
1 yintoni umzobo
1.1 Iimpawu zomzobo
2 Umzobo wantoni?
3 Iintlobo zemizobo
4 Indlela yokwenza umzobo
Masiqale ngokwazi kakuhle ukuba igama lomzobo libhekisa kwintoni. NgokweRAE, umzobo uya kuba:
Iprojekthi okanye inqaku eliqhelekileyo phambi kokwenziwa komsebenzi wobugcisa Inkqubo okanye iprojekthi apho nawuphi na umsebenzi uzobe umzobo. Inkcazo emfutshane yeempawu eziphambili zento ethile.
Ngamanye amazwi, sinokuthi luyilo lweprojekthi eyenziwayo ukucacisa umbono kwaye, ngayo, yenza utshintsho oluyimfuneko ukucacisa iprojekthi kunye noyilo ngokwalo.
Phakathi kweempawu, kwaye yintoni echaza umzobo, sinokufumana oku kulandelayo:
Yiyo umzobo ongekagqitywa. Enyanisweni, ayichanekanga, ayiphelelanga kwaye inokuba yenziwe ngokukhawuleza ukubonisa uluvo kodwa ngaphandle kwe-100% ukuyichaza. Oku kuthetha ukuba umsebenzi wokugqibela kunye nomzobo unokwahluka kakhulu omnye komnye.
Ngaba kusebenze kancinci kwaye ngaphandle kweenkcukacha ezininzi. Luqikelelo lokuqala koko sinokukuzuza ekuphumezeni loo mbono.
Iya ngesandla okanye ngesixhobo, kodwa isoloko ikhawuleza kakhulu kwaye ichazwa kakubi.
Ndiyakwazi Yiba ngumzobo ongaphezulu kwesinye. Ngenxa yokuba sisebenzisa izimvo ezahlukeneyo kwaye sizichaza zonke ngokwemizobo.
Ngokuqinisekileyo, ngenkcazo yeli gama uya kuba sele unombono wokuba yintoni ukusetyenziswa okunikezelweyo kumzobo. Kwaye oku kungenxa ukuyila, ngendlela yokuqala, iprojekthi, ngokuqhelekileyo iyiyilo.
Ngokomzekelo, kwiphepha lewebhu kuya kuba luncedo ukwazi ukuba umxholo wewebhu uza kuba njani, apho yonke into iya kubekwa khona, njl. Kwisigubungelo, izinto eziza kwenziwa zinokuchazwa; okanye kumzobo, nika ibrushstroke yengcamango anayo umbhali.
Ngokwenene umzobo uba yi inyathelo lokuqala ukwenza imbono ebijikeleze intloko yakho ibe yinyani. Ngaloo ndlela, iba sisiseko apho umsebenzi uqala khona, ukuphuhlisa iiprototypes de ufikelele kuyilo lokugqibela, oluchazwe ngakumbi, olucacileyo kunye nolwenziwa ngcono.
Into engaziwa ziingcali ezininzi kukuba kukho iindidi ezininzi zemizobo. Kukho iindidi ezintathu, nangona kwezinye iimeko kuthethwa ngezinye ezimbini. Zezi:
umzobo orhabaxa. Kukumelwa kombono kodwa ngoyilo olungachanekanga kakhulu, olungenazo naziphi na iinkcukacha. Kufana nokuba luhlaka lwengcamango onayo engqondweni.
Umzobo obanzi. Linyathelo elingaphaya kweyangaphambili. Kule meko sithetha ngomzobo oneenkcukacha ezincinci kwaye ngaphezu kwakho konke ukuchaneka. Sinokuthi ngumzobo orhabaxa kodwa kuqwalaselwe ngakumbi iinkcukacha kunye neendlela nezixhobo eziya kusetyenziswa kuyilo lokugqibela ziyasetyenziswa.
Umzobo omdaka. Kwakhona, elinye inyathelo. Kule nkcukacha kunye nokuchaneka okukhulu kakhulu kwaye kuyenza ikhangeleke njengesiphumo sokugqibela saloo projekthi. Kule meko, into ekhoyo kukusebenza ngeziphumo ezahlukeneyo okanye ubuchule bokubona ukuba iya kujongeka njani kwaye yeyiphi eyona ndlela ilungileyo.
Eminye imizobo esiyifumeneyo yile:
Umzobo womzobo. Kugxilwe ngokukodwa kwimizobo yobuso apho, ngokungafaniyo nangaphambili, kukho ukuchaneka okukhulu kwiimpawu ezibalulekileyo, nangona umzobo kunye nomzobo wokugqibela unokwahluka kancinane.
Mzobe. Kugxilwe ngakumbi kuyilo lwezakhiwo kuba ukongeza kuyilo, iqulethe imilinganiselo echanekileyo malunga nokuba loo projekthi iza kuphela njani.
Indlela yokwenza umzobo
Ukwenza umzobo awudingi zinto ezinkulu. Ngepensile kunye nephepha unokwaneleyo kuba yinto ekungafanele wenze iinkcukacha ezininzi kuyo. Ubuninzi, irabha xa wenze impazamo. Kodwa, ukwenza umzobo, kufuneka ulandele uthotho lwamanyathelo.
Umzobo awukwazi ukudalwa ukusuka ekuqaleni, kuba ngoko awuyi kusebenza. Umzekelo, ukuba uyalelwe ukuyila ileyibhile yemveliso, awukwazi ukucholachola wenze umzobo ukuba awunambono wangaphambili.
Ngumbono okunika izixhobo zokuqalisa ukusebenza. Ungacinga malunga nokuba le layibhile iya kuba njani, nokuba isikwere, uxande, ingqukuva okanye ezinye iimilo. Kwaye yintoni ngaphakathi.
Njengoko sikuxelele ngaphambili, iphepha kunye nepensile zingaphezulu kokwaneleyo. Kodwa kusenokwenzeka ukuba ukhetha ukuyenza usebenzisa itekhnoloji. Kule meko, kuyacetyiswa digitizing tablet, ikuvumela ukuba uzobe kwaye oku kufakwe kwiscreen sekhompyuter.
Ukwenza oku, uya kufuna inkqubo evumela ukuba uyenze, njenge-Autodesk Sketchbook okanye i-Procreate (eyokugqibela eyaziwa kakhulu), kunye ne-stylus.
Sithe umzobo ngumzobo onzima, ngaphandle kokuchaneka, ngaphandle kweenkcukacha ... Ulwandlalo nje okanye i-skeleton yento ofuna ukuyila.
Kodwa kufuneka uthathele ingqalelo ubuchule, kuba Akunjalo ukwenza umzobo wewebhusayithi kuneleyibhile, okanye imveliso. Okanye ibhanile.
Iifashoni, iintsingiselo, amaqhinga okuthengisa ... konke oku kuya kutshaja umzobo ukusebenzisa ubuchule esaziyo ukuba buyasebenza. Ibhanile enepateni yepeyinti ayiqhelekanga; iwebhusayithi apho usebenzisa kakubi imizobo okanye imifanekiso xa ingumcebisi wabasebenzi, nokuba. Ngaba uyayiqonda into esiyithethayo? Umntu kufuneka enze njalo nikela ingqalelo koko kujoliswe kuko, nto leyo ukuyila ngokusekelwe koko umxhasi kunye nokhuphiswano lweprojekthi banokusebenzisa ngakumbi ngokuthanda kwabo.
Njengoko ubona, umzobo yinto elula kakhulu ukuyiqonda kwaye wonke umntu uya kuba ewusebenzisile ngaxesha lithile. Kodwa ukuba ungumyili wegraphic okanye unomsebenzi apho kufuneka ufundise abathengi bakho iindlela ezahlukeneyo zokukhetha, umzobo unokuba sisixhobo esilungileyo ukuba uyakwazi ukuwusebenzisa kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » yintoni umzobo